Teknolojia · Janoary, 2019 · Global Voices teny Malagasy
Teknolojia · Janoary, 2019
Tantara mikasika ny Teknolojia tamin'ny Janoary, 2019
Iràka: “Soa ihany fa tsy Baomba tanaty Fiara!”
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 17 Janoary 2019
Rehefa avy niala sasatra kely aho, tsy misy tsara mihoatra nóho ny fanomezako ireo mpamaky izay tena tiany ho vakiana -teny avy any an-dalamben'i Bagdad sy Mosul. Ary tsy misy fotoana tsara nóho ity satria niverina nanoratra bilaogy i Chikitita, mizara ny fahitàny an'i Bagdad, nilaozany nandritra ny volana maro.
Amerika Latina 16 Janoary 2019
Notontosaina tamin'ny 29 Aogositra 2009, lavitry ny tanandehibe, tany amin'ny faritanin'i Santa Elena, tao anaty fironana manokana momba ny teknolojian'ny fanabeazana sy ny fanorenan'asa ny BarCamp fahatelo natao tany Ekoadaoro.
Arabia Saodita: Tonga mamonjy manoloana ny todra-drano ny tanoran'i Jeddah
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 15 Janoary 2019
Taorian'ny tondra-drano namely an'i Jeddah tamin'ny faran'ny volana Janoary, nampiasa tranonkala tambajotra sosialy ny tanora taranaka Saodiana mba hanampy amin'ny hetsika fanavotana amin'ny alàlan'ny fanomezana fanampiana, fialofana, sakafo na fitaterana ho an'ireo izay niharan'ny orana.
Amerika Latina 12 Janoary 2019
Fifaninanana natao ho an'ny rehetra, na inona na inona zompirenena zakainy, mba hanoratra, hampiseho sy hamorona votoaty milaza amin'izao tontolo izao ny momba anà toerana iray miavaka ao Kolombia tsy ho fantatry ny besinimaro amin'ny andavanandro. Hita anatin'ity lahatsoratra ity ireo ohatra avy ao Chocó sy Antioquia.
Azia Atsinanana 11 Janoary 2019
Afrika Mainty 10 Janoary 2019
Ankehitriny, miray indray ireo mponin'i Nairobi, izay mpifahavalo sy nanahy momba ny fiaviany ara-poko teo aloha, mba hamely ny minisitry ny governemanta ao an-toerana noho ny fanovàna ny làlan'ireo fitateram-bahoaka sy ny fanerena ny olona handeha an-tongotra lavitra be.